Warbixin ka hadlaysa waxa ka dhalan kara haddaan la bixin mushaaraadka Shaqaalaha iyo Ciidamada Dowladda | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Warbixin ka hadlaysa waxa ka dhalan kara haddaan la bixin mushaaraadka Shaqaalaha iyo Ciidamada Dowladda
Billihii ugu dambeeyay, ayaynaan wax mushaaraad ihi qaadan Shaqaalaha iyo Ciidamada Dowladda Somaliya, xilli Dowladdu ay dagaal adag kula jirto Ururka Al Shabaab, oo si weyn kaga soo horjeedo jiritaanka Dowladda Federalka.
Wasiir Ku Xigeenka Shaqada & Shaqaalaha Xukuumadda Somaliya, Cismaan Libaax Ibraahim, ayaa waxa uu xaqiijiyay in dhowr bilood aynaan mushaaraadkoodu helin Shaqaalaha iyo Ciidamada Dowladda.
Wasiir Ku Xigeenka oo la hadlay VOA, waxa uu tani ku sababeeyay, inay hakatay lacago xagga dibadda ah oo lagu kabi jiray mushaaraadka la siiyo dhinacyadaasi, isagoo intaa ku daray in xaalad adag ku shaqaynayan Shaqaalaha.
Mar la weydiiyay Libaax in masuq maasuq ay ku kici karaan Shaqaalaha Dowladda, ayaa afka ku ballaariyay inay taasi imaan karto, haddii aysan bil iyo laba bilood helin mushaaraadka.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa qiray inaanay muddo billo ah wax mushaaraad ihi qaadan Xildhibaanada, Shaqaalaha iyo Ciidamada Dowladda.
Xildhibaan Dalxa oo sidoo kale u waramay VOA waxa uu muujiyay amni darada hadhow ka imaan karta, haddii aysan Xukuumadda Somaliya bixin gunooyinka Shaqaalaha iyo Ciidamada Dowladda, suurta galnimada iyadoo ay ka faa’iideysan karto Al Shabaab.
Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ka jirta xaalad busaarad ah, tiiyoo ay qaylo dhaan ka muujinayso bulshada ku nool. Waxaadna daremaysaa in bulshadu uu kuleelku gaaray.
Busaaradda ka jirta Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa laga hadalhayaa goobaha ay bulshadu isgu timaado, hadalhaynta ugu badana waxay noqotay lacag la’aanta ka jirta Caasimadda.